Date My Pet » Top US Cities ho tokan-tena Vehivavy
Top US Cities ho tokan-tena Vehivavy
Misy antony mahatonga toerana tsara ho an'ny vehivavy manambady; toerana lehibe hangout, asa izay vola tsara, tsara tarehy, ry zalahy tokan-tena mahaliana, sakafo ara-pahasalamana dia azo antoka fa ny sasany amin'izy ireo. Ny tanàna ny vehivavy ireo misafidy ny hiaina any dia tokony hanana ny ankamaroan'ireo lafin-javatra ireo raha tsy izy rehetra. Ny lisitry ny tanàna US ambony vehivavy tokan-tena ho hitanao eto ambany dia nomanina mieritreritra ny maro ny lafin-javatra toy izany.
1. Chicago: Eto, vehivavy afaka mankafy ny fiainana tonga lafatra renivohitra; fa tena mihetsiketsika tanàna, fa tsy toy ny New York miavonavona City. Chitown, tahaka ny mponina pitiavana manondro ny tanàna toy ny, dia foibe ny kanto, ny kolontsaina sy ny tantara. Raha vao ianao amin'ity tanàna ity, dia mankahala fotsiny ny handao azy; dia nitondra ny mpifanolobodirindrina sy ny tsara tarehy-damaody torapasika.
Izany, Ahoana Ny Tsara ho tokan-tena tanteraka Chicago vehivavy? Oprah Winfrey, tokan-tena malaza indrindra ao amin'ity tany ity ny vehivavy, velona eto; Tokony izany dia manamafy fa ny tanàna no mampientam-po ampy ho anao ny miaina.
2. Los Angeles: Raha te hifaly amin'ny fiainana amin'ny fomba feno toy ny vehivavy tokana, ny misaintsaina ny miaina ao Los Angeles. Ity tany mifono zava-miafina dia feno tsara tarehy sy kanto ny olona; izany, indray mandeha ianareo eto, mahaliana ny mahita olona mifanerasera aminy dia tsy ho olana.
Miampy lehibe iray hafa tao an-tanàna dia ny mampino manana toetrandro izany nandritra ny taona. Tsara toe-draharaha foana hiaro anao amin'ny fanahy ambony, ary dia hanana ny hery mba hanao ny ankamaroan 'ny fotoana azonao avy niasa. ERY. dia aoka ianareo hanao ny zava-drehetra avy amin'ny lisitry ny celeb nahitana ny mikapoka ny tora-pasika.
3. Boston: Ny vehivavy tokan-tena hahita Boston hitsena irrespective ny sokajin-taona izy ireo an'i. Ho an'ny mpianatra, ilay tanàna malaza izay oniversite afaka hahazo ireo nisoratra anarana amin'ny. Raha tia miantsena ary te-hitafy foana zavatra damaody, misy Newbury Street, toerana tsara endrika mividy akanjo.
Raha toa ianao ka iray 'ireo izay tia anefa no voaro manodidina, sady afaka mifalifaly, ny tanàna manan-tantara maro arabe, tranombakoka, fampirantiana, efitrano malalaka sy ny zaridaina.
4. San Diego: San Diego foana ny tanàna fampiantranoana ny sasany amin'ireo toerana Mahatalanjona indrindra dia mandrakizay avy manerana. Izany, Raha mpitovo ianao, ary te-ankasitrahana fotoana eo amin'ny fiainanao, afaka hifindra any San Diego.
Ny tanàna dia manodidina ny Oseana Pasifika, an-efitra sy ny tendrombohitra; midika izany, raha ny toerana mety tsara mba handeha ho mampiaraka, misy safidy ampy hisafidy amin'ny. San Diego an-trano ihany koa ny tena NISOMEBISEBY Downtown.
5. Las Vegas: Ny vintana ny hividy mpiara-miasa nety tsara angamba no ambony indrindra raha Las Vegas ao. Araka ny 2013 lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Forbes, ity tanàna Nevadan manana ny ambony indrindra ny isan'ny olona tokan-tena ho an'ny vehivavy manambady rehetra monina ao aminy; ny isan 'ny vehivavy, ny tanàna 1.34 fa. Io endri-javatra ao an-tanàna Las Vegas mahatonga ny faha-5 ity entrant lisitry ny US ambony tanàna ho an'ny vehivavy tsy manambady.
Ny vehivavy rehetra avy tao izay mbola tokan-tena ary mikasa ny nanorim-ponenana teo amin'ny misy ny tanàna etsy ambony dia azo antoka fa hanana fiainana rocking.